Egypta: Navotsotra Rehefa Noferana Fa Tsy Hamahana Bilaogy Intsony Ilay Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2017 7:24 GMT
Taorian'ny roa volana tany am-ponja, navotsotra tamin'ny 3 Oktobra 2008 ilay bilaogera Egyptiana Mohamed Refaat.
Notanana nanomboka hatramin'ny volana Jolay i Mohamed Refaat, toniandahatsoratry ny tranonkala Matabbat, kanefa nandidy ny famotsorana azy ny fitsarana. Hoy ny tambajotra The Arabic Network for Human Rights Information et le Hisham Mubarak Law Center raha nanoratra tao anatin'ny fanambarana iray:
Tsy niresaka momba io fitokonana voalaza io mihitsy ny bilaogin'i Mohamed Refaat. Namoaka lahatsoratra momba ny fitiavana, ny fiainana ao Kairo sy ny votoaty manokana ilay bilaogera Egyptiana. Voampanga ho “nanakorontana ny andrim-panjakana izy sy nanozongozona ny filaminam-bahoaka ary nitarika fihetsiketsehana sy fitokonana tao amin'ny aterineto.” Tsy mitaky ny hametrahana porofo amin'ireo heloka bevava ireo ny lalàna Egyptiana.